Home - Nanolabs Blog
HELLO, I'M SKYE
WithaPHD in fashion,ahair ambassadorship with L’Oréal Paris andaglobal audience, Victoria is
the lady behind the award-winning fashion, travel and beauty blog, Inthefrow.
Work from home ဘယ်လို လုပ်ရမလဲ…
၁. စောစောထပါ ပုံမှန်ရုံးသွားရမယ်ဆို ရုံးချိန်မှီအောင် လုပ်ရတဲ့အတွက် စောစောထဖြစ်ပြီးတော့ တစ်နေကုန် လန်းဆန်းပြီး Productive ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အိမ်ကနေပဲ အလုပ်လုပ်ရမယ်ဆိုတော့ ရုံးသွားဖို့ အချိန်ယူစရာ
“ကဲ ….. Demo ပြဖို့ အားလုံးအသင့်ပဲလားဟေ့” “ဟုတ်ကဲ့ နေ့လည်လောက်ဆိုရင်တော့ အသင့်ဖြစ်ပါပြီ ” “ဘယ်လို ဖြစ်တာလဲ။မနေ့ကတည်းက အားလုံးပြီးနေပြီ မဟုတ်လား။” “ဟုတ်ပါတယ်။ Code
SOFTWARE COMPANY တစ်ခုကို ဘယ်လို OUTSOURCE လုပ်မလဲ? အပိုင်း(၂)
သင်က Tech အကြောင်း သိတဲ့သူ ဒါမှမဟုတ် သင့်အနီးအနားမှာ Tech Consultant တစ်ယောက် ရှိမယ်ဆိုရင် ကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့ သုံးထားတဲ့ နည်းပညာကို အချိန်တိုတွင်းသိနိုင်မှာပါ။ ပထမဦးဆုံး
Software Company တစ်ခုကို ဘယ်လို outsource လုပ်မလဲ? အပိုင်း(၁)
Software Company တစ်ခုကိုဘယ်လို outsource လုပ်မလဲ? အပိုင်း(၁) Software Company တစ်ခုရှာရတာ အရမ်း Challenging ဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ပိုက်ဆံတွေ အချိန်တွေရင်းထားရပြီး
ယခုခေတ်မှာWebsite တိုင်းရဲ့အာင်မြင်မှုကသူတို့ရဲ့Website Design ဘယ်လိုဖန်တီးထားသလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်။စာအုပ်တစ်အုပ်ရဲ ့မျက်နှာဖုံးကလှနေမှဆွဲဆောင်မှုရှိမှစာဖတ်ပရိတ်သတ်တွေကဝယ်ချင်ဖတ်ချင်မှာပါ။Website လည်းအဲ့လိုပါဘဲဟာကိုယ့်business တစ်ခုလုံးရဲ့မျက်နှာဖုံးဖြစ်တဲ့အတွက်လှပသေသပ်ပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိဖို့လိုပါတယ်
Dollar Sign In Your Eyes?
ကုမ္မဏီတစ်ခုမှာ ဈေးရောင်းဖို့က အဓိကအရေးပါတာလား။ ဈေးရောင်းတာ အရေးပါတာပေါ့ အပိုဝင်ငွေတွေ အမြတ်တွေရချင်လို့ပဲ ဈေးရောင်းနေကြတာပဲလေ။ ဒါပေမဲ့ ဈေးပဲအတင်းထိုးရောင်းတော့မှာလား? အဲ့ဒါဆို များများရောင်းနိုင်လေ မြတ်လေလား မေးစရာဖြစ်လာပါပြီ။ အဲ့ဒီမေးခွန်းမဖြေခင်
Website အဟောင်းတွေကို Update မလုပ်ပဲထားရင် ဘာတွေဖြစ်လာမလဲ…
Website အဟောင်းတွေကို update မလုပ်ပဲထားရင် ဘာတွေဖြစ်လာမလဲ မရင်းနှီးသေးတဲ့ customer တစ်ယောက်က Company တစ်ခု၊ Business တစ်ခုကို အကြောင်းကို သိချင်တယ်ဆိုရင် အရင်ဆုံး
By putting design and development talent to work, we build products that engage your users and help you achieve your business objectives.